Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Diem weputara usoro ihe ọmụma ọhụụ
Diem, usoro mgbasa ozi ọhaneze ọhụrụ, na-ebuputa imepụta oghere mmekọrịta dijitalụ maka ụmụ nwanyị na ndị na-abụghị ọnụọgụ abụọ ka ha jikọọ na isi ihe na-amasịkarị, na-ekwupụta ahụmịhe ọjọọ ha na-ezutekarị na netwọkụ mmekọrịta. Teknụzụ Diem na -ebute njikọ obodo yana ịkekọrịta ihe ọmụma nke ọma, na -apụ na ọdịnaya a haziri ahazi, nke anyị nwere ike itinye na ya na mgbasa ozi mmekọrịta yana na ahụmịhe nkeonwe, ebe ihe ọmụma bụ ụdị ego kacha mma.
Diem nọ na beta kemgbe Jenụwarị 2021 wee chịkọta ndepụta nke ihe karịrị mmadụ 20,000. Tupu mbipụta ọhaneze ya, Diem ejiri nlezianya lekọta ihe karịrị 100+ “Ndị ọbịa tọrọ ntọala” ịkekọrịta ahụmịhe nke ha na nghọta ruru eru ya na obodo dị mkpa, nke nwere mmasị na ya n'ime ikpo okwu site na ụdị synchronous & asynchronous. Ndị mmadụ nọ na Diem ga -enwe ike ịchọpụta ndị ọbịa sitere na nzụlite dị ka ndị ndụmọdụ ego, ndị ọchụnta ego na OBGYN. Ndị ọbịa tinyekwara ọnụ ụlọ nke ndị okike okike, ndị ọchụnta ego na ndị isi echiche ụlọ ọrụ gụnyere Kirsty Godso, Sabia Wade, Lauren Maillian, na Jaclyn Johnson, ha niile na -esonyekwa na Kọmitii Ndụmọdụ nke ụlọ ọrụ ahụ ịkpụzi usoro mmekọrịta ọha na eze ọzọ ha chọrọ ịbanye na ya. Johnson na-ekerịta, "Enwere m obi anụrị ịnabata na itinye ego na Diem, ebe m wulitere azụmahịa nke ụmụ nwanyị, m ghọtara mkpa ọ dị obodo ndị mepere emepe ka ndị mmadụ nwee ike jikọọ ibe ha na ndị ọkachamara n'ime oghere emere ha."
Otu n'ime ụkpụrụ Diem bụ iwulite teknụzụ na -enweghị isi na ihe riri ahụ, n'ihi na ọdịnihu nke mgbasa ozi mmekọrịta abụghị maka ịkpakọba anya anya site na ịkekọrịta arụmọrụ. Ọ bụ maka imeputa nyiwe nwere ụdị ego ha ga -esi na -enyekwara ndị mmadụ aka. N'ọdịnihu, Diem na-ezube imepụta ihe ọhụrụ, teknụzụ akụkụ abụọ nke netwọkụ mmekọrịta yana teknụzụ njikota a na-ahụkarị na egwuregwu na AR/VR iji zụlite mmekọrịta mmadụ na ibe ya, akụkụ atọ.
Maitree Mervana Parekh, onye ọchụnta ego na Acrew, na -akọwa, "Obodo na -akwalite nke mmadụ, na teknụzụ egosila ikike ya ịbụ akụ siri ike n'ịzụlite nke a. Agbanyeghị, teknụzụ nke na -ebute mbubata na ịdị mma abụghị ihe butere ụzọ. Ọ bụ ya mere m ji nwee mmasị na Diem. Ọ na -akwalite oke nke "netwọkụ mmekọrịta" ma na -emebe ahụmịhe miri emi, ahụmịhe mmekọrịta site na ala nke na -enyere ndị otu ya aka ijikọ, gbanwee ihe ọmụma, na -eme nke ọma n'ụzọ kpachaara anya yana tinye ya. "
Anyị niile maara na mgbasa ozi mmekọrịta na -enwe mmetụta dị ukwuu n'otú anyị si ebi, na -arụ ọrụ ma na -ekwurịta okwu, n'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụ ụmụ nwoke chepụtara nyiwe kachasị elu nke taa. Nke ahụ na-apụtakarị na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na-emebi iwu ọjọọ na inwe mmekọahụ, na-ahapụ ohere maka ụmụ nwanyị na ndị na-abụghị ọnụọgụ abụọ ka ha dịrị na ụwa mebere. Ọkachamara obodo, Abadesi Osunsade, na -ekwu, “Dị ka nwanyị, usoro mgbasa ozi na -elekọta mmadụ amalitela inwe mmetụta na -erigbu, na -agba anyị ume ka anyị bụrụ ndị na -adịghị ike na oghere ọha maka itinye aka. Diem bụ maka obodo na njikọ na -enweghị ebumnuche zoro ezo. ”
Diem na-apụta n'ihu ọha n'ime Ọktoba 2021. Ndị otu nọ na New York bụ ụlọ ọrụ Pọtụfoliyo Techstars NYC '20, nke $ 900,000 kwadoro na mkpụrụ ego tupu mkpụrụ akụ na ntinye aka site na Xfactor Ventures, Acrew na ndị mmụọ ozi na-eduga dị ka Onye nrụpụta & ịzụlite. , Jaclyn Johnson na Discord Executive, Amber Atherton.